कार्ला होरोलिका र पल बर्नार्डको अपराध
क्यानाडाको सबैभन्दा कुख्यात महिला सीरियल हत्यारा मध्ये एक, कार्ला होरोलोका, जेलबाट रिहा गरिसकेका थिए, जेल सजाय, बलात्कार, यौन उत्पीडन र हत्या गर्ने क्रममा 12 वर्षको जेल सजाय गरे। मृत किशोरहरूले उनको जवान बहन तिमी, जसको निर्दोष होमोलका द्वारा उनको प्रेमीलाई पॉल बर्नार्डोलाई उपहारको रूपमा प्रदान गरिएको थियो।
कार्ला होरोलिका49 1970 मा पोर्ट क्रडिट, ओन्टारियोियो मा डोरोथी र कार्ल होमोलिका को जन्म भएको थियो।
त्यो तीन, राम्रो, समायोजित, सुन्दर, स्मार्ट, लोकप्रिय, को सबै भन्दा पुरानो बच्चा र मित्र र परिवार द्वारा पर्याप्त प्यार र ध्यान प्राप्त भयो। कार्ला जनावरहरूको लागि एक जुनून विकसित र उच्च विद्यालय पछि, उनी एक पशु चिकित्सा क्लिनिकमा काम गर्न गए। बाहिर देखा पर्दा, कार्लाको बारेमा सबै कुरा सामान्य देखिन्छ। कुनै पनि संदेह छैन कि त्यो गहिरो मनोवैज्ञानिक इच्छाहरू लुकेको छ जुन अझै विचलित भएको थियो।
Homolka र बर्नार्ड मिलो
17 वर्षको उमेरमा हर्मोका टोरन्टोमा एक जनाको सम्मेलनमा भाग लिइन् र 23 वर्षीय पॉल ब्रान्डो भेटिए। बर्नार्ड एक आकर्षक गोला थियो, स्मार्ट र आकर्षक ढंगले उत्साहजनक देखिन्छ। उनीहरूले पहिलो पटक भेट्टाएका दिनहरूमा सेक्स गरेका थिए। उनीहरूले चाँडै पत्ता लगाउँथे कि पावलले तुरुन्तै मास्टरको स्थितिमा उत्प्रेरित गरे जस्तै एउटै दुःखमसोचिवादी इच्छाहरू साझा गरे र हर्मोल्कालाई खुशीपूर्वक दासको रूपमा भूमिका लिइरहँदा बर्नार्डोको हरेक फंतासी पूरा गरे।
अर्को केही वर्षमा, होमोलका र बर्नार्डबीचको सम्बन्ध बढ्यो र तिनीहरूले एक-अर्काको मनोवैज्ञानिक व्यवहारलाई साझेदारी गरे र प्रोत्साहित गरे।
यो समयको समयमा बर्नार्डोले होमोकाको अनुमोदन संग महिलाहरु मा बिरोधमा संलग्न भएको थियो। अज्ञात बर्नार्डो पुलिस र मिडिया द्वारा स्कारबोरो रैपिस्टको रूपमा डब गरिएको थियो। उनको विशेषता महिलाहरुलाई बक्स को बन्द गर्न मा हमला गरदै थियो, उनलाई हिंसात्मक गुदा बलात्कार र विभिन्न स्तर को अपमान सहन।
एक सर्चरेट वर्जिन
Homolka संग बर्नार्डोको निरन्तर उजुरी मध्ये एक थियो कि उनीहरूले भेट्टाएपछि कुमारी थिएनन्। Homolka, हरेक तरिका सम्भवतः बर्नार्डलाई प्रसन्न तुल्याउन समर्पित, उनको 15 वर्षीया बहिनी, टोमी, जसको कुमारीता एकदम थियो थियो उनको आकर्षणको बारेमा थाह थियो। दुईले निर्णय गरे कि उनीले आफ्नी जेठा बहिनीको लागि अपमानजनक कुमारी हुनमा टोमीलाई बल दिनेछन्। यो सहयोगको लागि, होमोकाले पशु चिकित्सकलाई हेलथेनलाई चोरी दिए जहाँ उनीहरूले काम गरे।
23 डिसेम्बर, 1 990को, Homolka पारिवारिक घर मा एक क्रिसमस पार्टी मा, बर्नाडो र होर्मोकाले हाल्सेसन संग स्प्यामी टमी अल्कोहल पेय को सेवा गरे। परिवारका सदस्यहरू सेवानिवृत्त भएपछि, दुरीले तहमीलाई तहखानेमा लिए र होमियोकाले टोल्थीको मुखमा एउटा कपडा लगाए। एक पटक टोमी बेहोश भएको बेला दम्पतीले उनको बलात्कार गरे। बलात्कारको समयमा टोमीले आफ्नै आफ्नै उल्टीमा कुकुर थाले र अन्ततः मरे। टोमीको प्रणालीमा लागू औषधि अचम्म लागेन र उनको मृत्यु दुर्घटनामा परेको थियो।
बर्नार्डोको लागि अर्को प्रस्तुति
Homolka र Bernardo, टोमी को मृत्यु द्वारा unscathed एक साथ मा गए। बर्नार्डले टोमीको मृत्युको लागि होमोकालाई दोषी ठहराए र उनलाई यौन सम्बन्धको आनन्द उठाउन बर्नार्डोको वरपरको अबस्था थिएन। Homolka का फैसला एक जेन नाउँक किशोरी राम्रो प्रतिस्थापन हुनेछ।
त्यो जवान र कुंवारी थियो र आकर्षक र पुरानो Homolka को मूर्खता लागेन। Homolka ले नसोचेको किशोरलाई रात्रि खानाको लागि निम्तो दिए, र तिमिले जस्तै, उनी केटीको पेय मन पराउँछिन् अनि घरभित्र विषाक्त किशोरलाई निम्तो दिए।
एकपटक त्यहाँ, होमोल्काले हेलथेनलाई प्रबन्ध गरे, र उनको वर्तमान, जवान सुन्दर जेन, बर्नार्डोमा प्रस्तुत गरे। त्यस जोडीले अविश्वसनीय किशोरीहरूको क्रूर यौन हमलाहरूमा संलग्न भएको थियो, भिडियो टेपमा घटनाहरू खिच्दै। अर्को दिन जब किशोरी जाग्यो, उनी बीमार र घाइते भए तर उनको शरीरलाई सहन गरेको उल्लङ्घनको बारे कुनै विचार थिएन। जेन, अरूको बिरुद्ध, एक शिकार थियो जसले जोडासँग मुठभेड बाँच्न सकेन।
बर्नाडोको लागि तिर्खा आफ्नो प्रेमी Homolka संग आफ्नो बलात्कार गतिविधि साझा गर्न। जून 15, 1 99 1 मा बर्नार्डो लेस्ली महफी को अपहरण गरे र उनलाई जोडे को घर ले आयो।
Bernardo र Homolka बारम्बार धेरै दिन को एक कोर्स मा माहौल परित्याग गरे, धेरै आक्रमण को प्रदर्शन। अन्ततः उनीहरूले महफीलाई मारे र तिनको शरीर टुक्रामा राखे, सिमेन्टमा टुक्राहरू गुमाए, र सिमेन्टलाई झीलमा फ्याँक्यो। जून29 मा महफीको बिरुवा पोखरीमा एक जोडाउन्जले भेट्टाइयो।
Bernardo र Homolka विवाह
जुन29 दिन पनि बर्नार्डो र होमोलिकाले निगाारा-मा-लेक चर्चमा आयोजित एक विस्तृत विवाहमा विवाह गरेका थिए। बर्नार्डो विवाह योजनाहरु मा नियंत्रण मा रहेको थियो जसमा एक सफेद घोडा मा दुलही दुलही संग एक घोडा घोडा-खींचा गाड़ी मा दुई सवारी शामिल थियो। विवाहको अतिथिले उनीहरूको नयाँ पतिलाई "प्रेम, आदर, र आज्ञा पालन गर्ने" मा परिणत गरेका थिए, जो जोडीले आफ्नो भित्ताहरू परिवर्तन गरेपछि एक भव्य बैठ-खाना खाने काम गरिरहेको थियो।
16 अप्रिल, 1 993मा युगलले 15 वर्षको उमेरमा क्रिस्सेन फ्रान्सेलीलाई चर्च पार्किंगबाट अपहरण गरेपछि होमोल्काले उनीहरूलाई आफ्नो कारलाई तालिम दिएका थिए। दम्पतीहरूले फ्रान्सलाई आफ्नो घरमा ल्याए र धेरै दिनका लागि उनीहरूको अपमानजनक, अत्याचार र यौन दुर्व्यवहारमा यौन दुर्व्यवहार गरे। फ्रान्सेलीले आक्रमण गर्न जरुरी प्रयास गरे तर दाँया पहिले Homolka परिवारसँग ईस्टर आइतबारको खाने को लागि बायाँ राखे, उनीहरूले उनको हत्या गरे। उनको शरीर बर्बरटनको खाडीमा 30 अप्रिलमा फेला पर्यो।
होमोल्काले बर्नार्ड छोड्छ
जनवरी 1993 मा, होमोल्का निरन्तर भौतिक दुर्व्यवहारको कारणले गर्दा उनी धेरै महिनाको लागी बर्नार्डोबाट अलग रह्यो। तिनको आक्रमणहरू बढ्दै गएको कष्टपूर्ण भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप होमोलका अस्पताल भर्ती भएको छ।
उनले उहाँलाई छोडे र पुलिसको अफिस थियो कि तिनको बहिनीको साथी संग गए।
पुलिस स्कारबोरो रैपिस्ट को पहिचान गर्न मद्दत मा साक्ष्य निर्माण भएको थियो। संदिग्धको एक समग्र रेखाचित्रलाई रिहा गरियो, र बर्नार्डोको काम सहयोगीले पुलिससँग सम्पर्क गरे र बर्नार्डोले स्केचसँग मेल खान्छ भनेर सूचना दिए। प्रहरीले बर्नार्डो साक्षात्कार गरे र उनको लिफ्ट लिबिया प्राप्त गरेका थिए जसले पछि लागेका सकारात्मक परीक्षण गरे, तर यो 1993 सम्म पुग्न सकेन कि एक सटीक फोरेंसिक म्याच बर्नोर्नो प्रमाणित गर्न स्कर्बोरोफ रैपिस्ट थियो।
ओंटारियो ग्रीन रिबन टास्क फोर्स
बर्लिनो र होमोलोका मा केटीहरु को हत्या को सुलझाने को लागि ओनटारियो ग्रीन रिबन टास्क फोर्स को आवंटित गरियो। Homolka फिंगरप्रिन्ट र सोधिएको थियो। डिटेक्क्चरहरूको विशेष चासो एक मिकी माउसको बारेमा थियो कि हेरोल्काले त्यस्तो देख्यो कि क्रिस्टन फ्रान्सेलीको रातको त्यो रात गुमाएको थियो। Homolka प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि बर्नार्डको स्कारबरोफ रैपिस्टको रुपमा चिनिन्थ्यो। उनी पनि जान्दथे कि बाँकी रहेकाका अपराधहरू चाँडै हटाइनेछ।
Homolka, जोड़ी को साकार गर्न को लागी जाँदै जान्छ, उनको चाचा स्वीकार गरे कि बर्नार्डो एक सीरियल राप्ती र हत्यारा थियो। उनले पनि एक वकील प्राप्त गरे र बर्नार्डो को विरुद्ध उनको गवाही को बदले बदली मा एक दलाल मा बातचीत शुरू गर्यो। फेब्रुअरीको फेब्रुअरीमा बर्नार्डलाई स्कारबोरो राप्ती र माफी र फ्रान्सेलीको हत्याको साथ पक्राउ गरिएको थियो। दम्पतीको घरको खोजीमा, प्रत्येक अपराधको लिखित वर्णनको साथ बर्नार्डोको डायरी फेला पर्यो।
क्यानाडाको इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो खुशी सम्झौता
होमोल्काको लागि एक अनुरोध सम्झौतामा छलफल भएको थियो जुन उनको गवाहीको बदमामा अपराधमा सहभागी हुन उनको लागि बाह्र वर्षको सजाय हुनेछ। सरकारले तिनलाई राम्रो व्यवहारको साथ तीन वर्ष सेवा गरिसकेपछि पोलको लागि योग्य हुनमा सहमत भए। Homolka चाँडै सबै सर्तहरूसँग सहमत भए र सम्झौता सेट गरियो। पछि, सबूत पछि थियो, अनुरोध को सम्झौता क्यानाडा को इतिहास मा सबै भन्दा खराब एक को रूप मा जानिन्छ, शैतान संग एक सम्झौता गर्ने आरोप लगाउने सरकार संग।
एक सम्झौता एक डील हो - शैतानको साथ पनि
Homolka सधैं बर्बाद बर्नार्डो को अपराधी गतिविधि मा भाग लिन को लागी एक दुर्व्यवहार पत्नी को रूप मा। यो न्युयोर्कका न्युयोर्कका र बर्नार्डोले बर्नार्डोको पूर्व-वकीलबाट पुलिसमा फर्केर आएका थिए, जुन यो स्पष्ट भयो कि Homolka आफूलाई पीडितहरूको साथ मजा आयो र अपराधमा होमोल्काको संलग्नतालाई हल्का पारेको थियो। उनको स्पष्ट अपराध को बावजूद, एक सौदा एक सौदा थियो, र उनको उनको अपराध को लागि फिर्ता नहीं लिया जा सका।
बर्नार्डोले बलात्कार र हत्याको सबै गन्तीमा दोषी ठहराए र उनले 1 सेप्टेम्बर, 1 995मा जीवनको सजाय पाएका थिए। Homolka मार्च 2001 मा पेरोल बोर्ड अघि गयो, तर नेशनल पेरोल बोर्डले पेरोलको लागि उनको आवेदन अस्वीकार गर्यो " कि, यदि जारी गरिएमा, तपाईं अपराधको सम्भावना हुनसक्नुको कारण मृत्यु वा गम्भीर क्षतिको कारणले गर्दा तपाईले अब सेवा गरिरहेको वाक्यको म्याद समाप्ति गर्नु अघि अर्को व्यक्ति। "
Homolka को गिरफ्तारी को अफवाहहरु उनको sunbathing को चित्रहरु र अन्य कैदियों संग पार्टी को पछि धेरै नै स्पष्ट रूप देखि रहेको छ क्यानाडा को समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित गरियो। ट्याब्लोइडले भने कि उनी क्रिस्टीना शेरीसँग समलैंगिक सम्बन्धमा थिए, जसले एक बालिकाको बलात्कार गरे। यो पछि निर्धारण गरिएको थियो कि उनको समलैंगिक प्रेमी शेरिरी थिएन, तर लिन्डा वेरोउन्उ, जसले बैंक चोरीमा भाग लिने सजाय पाएको थियो।
जुलाई 4, 2005 मा, Homolka Ste-Anne-des-Plaines जेलबाट रिहा गरियो। उनको रिलीजको शर्तको रूपमा होरोलिकामा न्यायालय-आदेश गरिएका प्रतिबन्धहरू राखिएको थियो:
पुलिसको घरको ठेगाना, कामको ठेगाना र जसमा उनी बाँचेका साथ प्रदान गर्नुहोस्।
माथिको जानकारीमा कुनै पनि परिवर्तनको पुलिस सूचित गर्नुहोस्।
उनको नाममा कुनै पनि परिवर्तनको पुलिस सूचित गर्न आवश्यक छ।
72 घण्टाको सूचना दिन आवश्यक छ यदि त्यो 48 घण्टा भन्दा बढीको लागि घर बाट टाढाको योजना हो।
Paul Bernardo , Leslie Mahaffy र क्रिस्टन फ्रांसीसीका परिवार वा त्यस स्त्रीको जेन डो (माथि हेर्नुहोस्), वा कुनै हिंसक अपराधीहरूलाई सम्पर्क गर्न निषेध गरिएको छ।
16 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूसँग निषेधित
नुस्खा औषधि भन्दा अन्य लागू औषधि लिनबाट निषेधित।
उपचार र सल्लाह जारी राख्न आवश्यक छ।
डीएनए नमूनाको साथ पुलिस प्रदान गर्न आवश्यक छ।
हाउकोको वकीलले उनीहरूलाई "आतंकवाद राज्य" मा रिहाएको थियो।
"उनी डरलाग्दो डरलाग्दो छ," उनको एक वकील, क्रिश्चियन लैचान्सले भन्यो। "जब मैले उसलाई देखे, त्यो आतंकको अवस्थामा थियो, लगभग एक ट्रान्समा थियो। त्यो कल्पना गर्न सक्दैन कि उनको जीवन बाहिर जस्तो हुनेछ।"
बर्नार्डो जीवनको सजावट गर्दैछ।
ग्रेग ओ. McCrary द्वारा अज्ञात डार्कनेस
कार्ला होमोलका साक्षात्कार -cbc.ca को ट्रान्सक्रिप्ट
जेके रोलिङ पारिवारिक ट्री
संयुक्त राज्य अमेरिका मा डाकघर भवनहरु
डम्ब मिशेल बाचमन उद्धरण
उत्तरपश्चिमी विश्वविद्यालय जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
2017 मा आकस्मिक बिक्रेताहरू आउँदैछन्
पर्ल हार्बर: प्यासिफिकमा अमेरिकी नौसेनाको घर
मंगल ओर्बिट्री मिशन (MOM) संग मंगल ग्रहण अन्वेषण
आवधिक तालिका अध्ययन गाइड - परिचय र इतिहास
कफी कप र बम क्यालोरीमेटिरी
"Eleemosynary," ली Blessing द्वारा एक पूर्ण लम्बाई प्ले
जम्पिंग स्पाइडरहरू कसरी जम्प गर्छन्?
विश्व गोल्फ रेजिङ
7 महान क्लासिक सिनेमा एलिजाबेथ टेलर स्टारिंग
10 दिलचस्प म्याग्नेशियम तथ्यहरू
बौद्धिक सम्पदा वकीलहरू - नयाँ विचारहरू सुरक्षित राख्छन्
प्रगतिशील युगको अफ्रिका-अमेरिकी संगठन
स्वास्थ्यका लागि रत्न
के तपाईंको एपी टेस्ट स्कोर राम्रो छ?
लुइस बुर्जोको जीवनी